Filtrer les éléments par date : samedi, 23 février 2019
samedi, 23 février 2019 22:58
Nalefa ao amin’ny fonjaben’i Tsiafahy ireo fito voarohirohy tamin’ny fanafihana mitam-piadiana nahafatesana olona roa tao Mahitsy ny 9 febroary teo
Efa maizina ny andro, ny alakamisy teo, vao nivoaka ny didy savaranonando itazomana am-ponja vonjimaika azy ireo. Notazomina teny amin’ny fonjan’Antanimora aloha izy ireo io alina io vao nafindra any Tsiafahy omaly.
Nanokafana fanadihadiana mahakasika ny fahazoana harena tsy ara-dalàna ny Zandary iray mbola amperinasa, hita tamin’ny « caméra de surveillance », nandray anjara tamin’io fanafihana io.
samedi, 23 février 2019 22:55
Ruffine Tsiranana: Nodimandry tao Paris teo amin’ny faha-80 taonany
Androany misandratr’andro no nandao ny tany tao an-drenivohitr’i Frantsa, noho ny aretina nahazo azy, i Ruffine Tsiranana.
Zanaka vavy fahatelo tamin’ireo dimy vavy sy telo lahy zanaky ny filohan’ny Repoblika voalohany, Philibert Tsiranana sy Justine Kalotody izy.
Administratera sivily, i Ruffine Tsiranana. Efa filoha nasionalin’ny antoko PSD (Parti Social Démocrate) izy. Minisitry ny fitsinjaram-pahefana tao amin’ny governemanta Omer Beriziky, tamin’ny tetezamita niraisana ary efa Loholon’i Madagasikara.